Linux 5.18 izao dia misy fanatsarana maro ho an'ny AMD sy Intel | ubunlog
Linux 5.18 izao dia misy fanatsarana maro ho an'ny AMD sy Intel, ary manohana ny chip Tesla FSD
pablinux | 22/05/2022 22:35 | Nohavaozina amin'ny 22/05/2022 22:36 | Linux, Ubuntu
Nanao ahoana ny fivoarana?, nampoizina tamin'ny 22 mey izany ary manana dikan-teny vaovao amin'ny kernel isika. Linus Torvalds nanao azy io ho ofisialy ny fanombohana ny Linux 5.18, dikan-teny nampiditra fiovana maro. Amin'io lafiny io, lehibe ny 5.18, fa ny habeny na ny lanjany amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy latsaka ao anatin'ny fetra ara-dalàna ho an'ny fandefasana. Toy ny mahazatra, dia mampiditra fiovana amin'ny endrika fanohanana nohatsaraina, saingy misy marika roa izay hahazo tombony bebe kokoa noho ny ambiny.
Ao amin'ny Linux 5.18 fanovana maro no nampidirina an'izany dia hanatsara ny fanohanana ny fitaovana AMD sy Intel. Ho fanampin'izay, hanohana ny chip Tesla FSD ihany koa izy, FSD no fanafohezana ny Full-Self Driving. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Teslas an'i Elon Musk dia tohanan'ny kernel Linux amin'ny fomba ofisialy. Marina koa fa i Torvalds sy ny mpiara-miasa dia tsy manao na inona na inona tsy misy antony, ka miaraka amin'ny Linux 5.18 dia afaka mitatitra vaovao izahay fa nihatsara i Tesla.
Asongadin'i Linux 5.18
Lista namorona nataon'i Michael Larabel:
Fanavaozana ny fandaharam-potoana manodidina ny fifandanjana NUMA izay afaka manatsara kokoa ny fahombiazan'ny mpizara AMD EPYC manokana.
Ny fanohanan'ny Intel's Hardware Feedback Interface dia natambatra tamin'ny mpamily "HFI" vaovao an'ny Intel ho an'ity endri-javatra manan-danja amin'ny processeur hybrid ity.
Intel Software Defined Silicon dia natambatra ho an'io endri-javatra mampiady hevitra an'ny Intel CPU momba ny famelana ny fampahavitrihana ny endri-javatra Silicon fanampiny amin'ny fampiasana fanalahidy voasonia cryptographically. Tsy mbola nanambara ny vokatra miaraka amin'ny SDSi i Intel, saingy inoana fa ho eny an-dalana, na dia tsy mbola mazava aza ny CPU / endri-javatra mety avadika ho modely fahazoan-dàlana.
Intel Indirect Branch Tracking (IBT) dia tonga. Ity dia ampahany amin'ny teknolojia Intel Control-Flow Enforcement miaraka amin'ny Tiger Lake sy ny CPU vaovao kokoa hanatsarana ny fiarovana.
Ny fanohanan'ny Intel ENQCMD dia naverina naverina naverina alohan'ny Sapphire Rapids, taorian'ny nanesorana ny kaody taloha tao amin'ny kernel noho ny fahatapahan'ny.
Fanatsarana ny virtoaly AMD nested ary koa manodidina ny virtualization nested.
AMD dia manomana kaody mpamily feo vaovao ho an'ny sehatra ho avy.
Fanomanana AMD EDAC bebe kokoa ho an'ny Zen 4.
Intel PECI dia natambatra ho Intel Platform Environment Control Interface ho an'ny fifandraisana eo amin'ny CPU sy BMC amin'ny sehatra mpizara.
Mpamily AMD HSMP natambatra ho an'ny seranan-tsambo fitantanana rafitra mpampiantrano mba hahazoana fampahalalana fanampiny amin'ny sehatra mpizara AMD.
Ny mpamily Intel Idle dia manampy fanohanana teratany ho an'ny CPU Intel Xeon "Sapphire Rapids".
Ny mpamily Intel P-State izao dia hampiasa ny sandan'ny EPP default asehon'ny firmware fa tsy mampiasa sanda EPP voafantina mafy hatramin'izao.
Fiomanana amin'ny virtoaly Intel IPI.
Fanakambanana kaody AMD sy Intel bebe kokoa.
Fanohanana CPUPower ampiasaina amin'ny mpamily P-State AMD izay nampidirina tao amin'ny Linux 5.17.
Ny KVM izao dia manohana milina virtoaly AMD miaraka amin'ny vCPU hatramin'ny 511 izay hatramin'izao dia hatramin'ny 255 vCPUs ihany no azo natao ho an'ny rafitra AMD.
Fanohanana fitadidiana virtoaly RISC-V Sv57 ho an'ny tabilao pejy dimy ambaratonga miaraka amin'ny fanatsarana maritrano CPU hafa ho an'ity CPU ISA tsy misy rohim-panjakana ity. Ny sasany amin'ireo asa hafa ireo dia misy ny fanohanan'ny interface RSEQ (Restartable Sequences) ary ny fanohanan'ny RISC-V CPU Idle.
Ny fanohanana ny chip FSD an'i Tesla dia natsangana tao amin'ity ARM SoC miorina amin'ny Samsung ity izay mampiasa ny solosaina feno fiara Tesla.
Ny Razperry Pi Zero 2 W dia mifanaraka amin'ny kernel Linux mainline.
Esory ny kaody maritrano Andes NDS32 CPU satria tsy voatazona intsony io kaody io ho an'ilay maritrano AndesCore 32-bit ampiasaina amin'ny fanaraha-maso famantarana nomerika sy fampiharana IoT.
GPU sy Graphics:
Ny maody video AMDGPU FreeSync dia alefa amin'ny alàlan'ny default raha ampitahaina amin'ireo kernel teo aloha izay nila ny safidy maody AMDGPU mba hahafahan'ny FreeSync video mode.
Ny AMD dia nanomana kaody ho an'ny GPU ho avy / ho avy mba ho azo atao amin'ny alàlan'ny block-by-block, noho izany dia tsy mampientam-po loatra amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fivoahana / famoahana antsipiriany vaovao.
Ny fanohanan'ny CRIU ho an'ny mpamily AMDKFD amin'ny fanamarinana/famerenana ny fahafahan'ny ROCm compute enta-mavesatra no tanjona voalohany.
Fanohanana ny subplatform Intel DG2-G12 ho variana vaovao miaraka amin'ny tanjona DG2/Alchemist G10 sy G11 nambara. Betsaka ihany koa ny asa tsary discrete DG2/Alchemist amin'ny ankapobeny.
Fanohanana sary an-tsary Intel Alder Lake N.
Fampandehanana FBDEV haingana kokoa ary fanamboarana mpamily FBDEV bebe kokoa.
Fanohanana ny ASpeed ​​​​AST2600 sy ny fanovana mpamily DRM kely hafa.
Fanovana sy fanampina fitaovana hafa:
Fanaraha-maso sensor nohatsaraina ho an'ny reny ASUS vaovao.
Nitombo ny fahafahan'ny Compute Express Link (CXL).
Ny mpamily decoding video Tegra an'ny NVIDIA dia navotsotra tamin'ny dingana famoahana ao amin'ny subsystem media.
Mpamily fampidirana vaovao ho an'ny fitendry Mediatek MT6779 sy efijery fikasihana Imagis.
Ny fanohanan'ny ACPI Platform Profile dia miasa tsara ho an'ny ThinkPads ampiasain'ny AMD.
Vahaolana mpamily bebe kokoa ho an'ny takelaka Android x86.
Nitohy ny fanatsarana ny fanohanana klavier Apple.
Mpamily HID ho an'ny kitendry misy IC SigmaMicro hafahafa.
Mpamily Razer HID ho an'ny kitendry/fitaovana Razer izay tsy mifanaraka tanteraka amin'ny HID.
Fanavaozana tambajotra marobe, toy ny mahazatra.
Fanamboarana ny politika mafana ho an'ny solosaina finday HP Omen sasany.
Fanohanana feo Intel Alder Lake "PS".
Rafitra fitahirizana sy fichier:
Nofoanana ny ReiserFS ary tokony hesorina amin'ny taona 2025 ny mpamily rafitra fichier.
Ny endri-panoloran-tena haingana an'ny EXT4 dia tokony ho haingana kokoa sy azo esorina kokoa.
Fiovana lehibe roa ao amin'ny exFAT mba hamela ny teboka farany amin'ny lalana ary hampitsahatra ny famafana ny "VolumeDirty" ho zava-dehibe mba hisorohana ny fanafohezana ny fitaovana fitahirizana.
Asa fototra amin'ny fanomanana EROFS vakiana fotsiny mba hanohanana ireo endri-javatra vaovao.
Ceph dia miresaka "olana tena ratsy" ary manao fanatsarana hafa.
Fanatsarana XFS bebe kokoa.
Fanohanana ny NFSD ho an'ny toetran'ny rakitra NFSv4 ho an'ny fotoana famoronana rakitra.
F2FS fanatsarana fampisehoana.
Btrfs dia manampy fanohanana I/O voafefy sy fsync haingana kokoa.
Ny FSCRYPT dia manampy fanohanana I/O mivantana ho an'ny rakitra miafina.
Endri-javatra vaovao sy fanatsarana haingana ny IO_uring.
Be dia be ny sakana sy ny NVMe optimizations, anisan'izany ny asa tsy misy farany amin'ny mahomby kokoa I/O/ambany ambony.
Fanohanana feo Intel Raptor Lake.
64-bit ARM izao dia manohana ny Shadow Call Stack (SCS).
Ny safidy random.trust_bootloader vaovao dia ampiana miaraka amin'ny fanovana hafa amin'ny RNG, anisan'izany ny fanatsarana manan-danja sasany amin'ny kisendrasendra notarihan'i Jason Donenfeld.
Ny mpamily Xen USB dia nohamafisina tamin'ireo mpampiantrano ratsy mety hitranga.
Fanafainganana ny AVX ho an'ny lalana crypto SM3 miaraka amin'ny fanatsarana ARM isan-karazany any amin'ny faritra hafa amin'ny subsystem crypto.
Hetsika kernel hafa:
Defconfig x86/x86_64 dia mampiasa -Werror amin'ny alàlan'ny default handefasana fampitandremana ho an'ny compiler ho lesoka mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny code tsara kokoa.
Fikarakarana mora kokoa amin'ny compiler LLVM/Clang miaraka amin'ny fanohanana ny tadin'ny version postfixed ary fanohanana ny LLVM/Clang rehefa apetraka ivelan'ny PATH.
Ny fiovana ao amin'ny hazo iray manontolo mba hiova avy amin'ny laharan'ny halavany aotra ho mpikambana ao anatin'ny laharan-tseza.
Ny fiovan'ny C89 ho C11 ho an'ny dikan-teny C kendrena.
DAMON dia manampy ny "DAMOS" sysfs fanaraha-maso interface tsara.
Linux 5.18 dia navoaka ny alin'ny 22 mey, fa ny misy amin'izao fotoana izao dia ny tarball-ny ary tsy maintsy apetrakao amin'ny tanana. Na i Linus Torvalds sy ireo mpihazona kernel dia samy manoro hevitra ny miandry mandra-pahatongan'ny fanavaozana fikojakojana voalohany ho an'ny fananganana faobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » General » Linux » Linux 5.18 izao dia misy fanatsarana maro ho an'ny AMD sy Intel, ary manohana ny chip Tesla FSD
Ubuntu dia manamboatra lesoka fiarovana telo amin'ny fanavaozana kernel farany
Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu dia hivadika amin'ny PipeWire ho an'ny fitantanana feo